Kuyini - eyindoda elungile? Iziphi izimfanelo umuntu omuhle? Wazi kanjani ukuthi umuntu omuhle?
Kukangaki, ukuze baqonde yini noma cha ukuxhumana nomuntu othize, kuba imizuzu embalwa nje ngokwanele! Futhi ake sithi ukuthi ngokuvamile kakhulu umbono wokuqala uyakhohlisa, kuba zokuxhumana kokuqala lisisiza ukuba sithole salo sengqondo sokungafuni kumuntu ukuthi sibona phambi kwakho.
imizwa Okuqotho nezenzo
Ezimweni eziningi, indoda enhle - nguye osiza abantu abasondelene naye. Kodwa lokhu kuphakamisa umbuzo wokuthi ngabe kubaluleke ngempela yonke into kusukela inhliziyo noma umane ususe inzuzo bona ngokusiza abanye. Kanye inketho, umuntu kungasiza abantu ukuba bacabangele zonke ezinhle yakhe futhi lunomusa.
Kasibili kuphephile ukuphetha ngokuthi umuntu omuhle - umuntu, okuyizinto imizwa ezingajwayelekile ezifana umona, intukuthelo nenzondo. Ngisho noma othile enza okuthile kuye ezimbi, kodwa iqiniso liwukuthi akayikhokhi igqubu, futhi nakakhulu ngeke baziphindiselele.
Futhi uzinake Kuyaphawuleka ukuthi indoda enhle bonke abantu abasondelene naye futhi omuhle. Yena ungavumeli muntu isilahle, ngisho noma ukuziphatha kothile akuvumelekile nhlobo. Ngaphezu kwalokho, uye elakhiwe ngokucacile umuzwa nokuhlonipha abanye.
Futhi-ke, umuntu omuhle akalokothi kubeka yokuzibeka ngaphezu ubani. He is ngokuphelele umqondo lingekho bokuphakama phezu kwabanye. Futhi, akalokothi, ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, azame ukushintsha omunye umuntu. Phela, abantu abaphelele, ngakho-ke ukushintsha kubo akwenzi mqondo, bamane ukhombe amanye amaphutha ezenziwa kubo.
Unamathela lokhu kubukwa wayemane nje eyindoda elungile, uyayihlonipha nabantu ababemzungezile kanye nomhlaba wonkana. Kubantu abanjalo, akukho ukwehlukana nezidalwa ehloniphekile futhi nedoynyh, ziyaziswa njengamalungu ngokulinganayo, hhayi kuphela abameleli zazo siqu, kodwa futhi kwenzekani kubafowethu. Futhi kwenhlonipho emhlabeni ezungeze futhi izidalwa eziphila kuwo. Phela, izwe lethu neze: isibonelo, ngoba amagciwane elimazayo. Ekhuluma ewukuhlakanipha okwenziwe the "bacterium" yasekuqaleni angasebenza futhi abantu ababi, owavele, ushevu impilo abanye abantu.
Kufanele ngibe ezinhle
Nakanjani ukuthi yindaba ekhathaza abaningi. Ikakhulukazi ezweni lethu lesimanje, lapho kuyo yonke indawo kudlangile zobubi nokungabi khona kobulungisa. Lapha ngezinye izikhathi kuye kudingeke ucabange ukuthi ukuba umuntu omubi kuba lula kakhulu kunokuba kusize. Lokho lesi sitatimende liyancedisana abantu abaningi ku-hhayi ngempela into elungile. Konke lokhu kungenxa yokuthi umuntu efika engqondweni wacabanga ukuthi ngisho noma wenza into enhle, kodwa akubukeki singashintsha izwe libe yindawo engcono. Kodwa uma ucabanga ngakho, iba sobala uma umuntu ngeke isize, abanye uqiniseka sokuba ufane nazo.
Uba kanjani umuntu omuhle
Cishe, akunakwenzeka ukuba kukhona uhlelo oluthile futhi imiyalo yesinyathelo ngasinye, kodwa ezinye izincomo azosiza ukuthi ube yindawo engcono, sisekhona sona.
Into yokuqala okumele uyenze - ukuqala ukucabanga unjengomuntu ezinhle. Kodwa ingabe lokhu kwenzeka kanjani? Kufanele kuqondwe ukuthi yonke imibono nemicabango kufanele iqondiswe eceleni kuhle. Asikho isidingo ukubheka emuva futhi bacabanga abangu udinga indlela qhubeka ukucabanga ngokuthi ungena kanjani ukukopela nsuku zonke ukuze okungcono. Eqinisweni, umqondo womuntu elawula zonke izici zokuphila komuntu.
Ukuze ube umuntu omuhle ngempela, kudingeka ukuba lokhozi izinguquko ezenzekayo emhlabeni ezungeze. Kuyadingeka ukuthi uyazindla ngendlela abantu abasabela ngayo izenzakalo ezithile, okuyinto okukhiphayo babonani ezinye ingxenye ukuthatha kule noma leso senzo. Nalapha futhi, kumelwe sikhumbule ukuthi umuntu ngamunye unomthwalo siqu, baqinisile zomuntu siqu umbono kuyo yonke into. Futhi, akubuzwa ukuthi kubalulekile ukuthatha umbono yabanye abantu. Kuphela nale ndlela kungenza ngcono ezweni elisizungezile, futhi ukwazi yena.
Isikhathi esining impela thina bayakhohlwa onjalo into ebaluleke nokuphefumula. Kodwa kwakungegazi usizo lwakhe, ungakwazi kakhulu bashintshe isimo sabo kule noma ukuthi isimo. Ngokwesibonelo, esimweni intukuthelo ngokwanele ukwenza umoya ezintathu ezijulile kule umuzwa kwaqala ukuncipha. Yebo, yilokho kuphela umoya ezintathu ezijulile ungagcina isimo futhi silisebenzise efanele. Ngemva lolu hlobo umsebenzi, uzophawula indlela kancane kancane intukuthelo uqala wehlise, futhi usuvele ungafuni siyathukuthela. Kufanele sikhumbule silula, kodwa umthetho ewusizo: zonke izinqumo kufanele kuthathwe hhayi esimweni intukuthelo, njalo ngamazwi nangezenzo kumele ukubuqonda futhi ucabangé. Wena nje kufanele baqonde ukuthi isimo ujabule akunakwenzeka ukuba uthole isinqumo esifanele futhi soberly ukuhlola isimo. Isikhathi esining impela, uma ufuna ukuveza imizwa yakho yokuphelelwa ithemba anjengomhlambi Snowball ukugudla ngokushesha kuwe, ungakwazi sengidonsa umoya bese uyazama ukuzola, ngomqondo ongokomfanekiso, ukuthatha umoya.
Empeleni, ukuze ibe umuntu onesimilo ungenza yonke mass. Ngisho ezweni lethu lesimanje nokuncane enobudlova. Ngokwesibonelo, usuku ngalunye uthathe udoti, futhi kukhona ngokuqinisekile okusalile kusuka idina lakho. Ngakho, awanike abampofu, maningalahli. Ingena ibhasi, yadedela bani kunzima ngempela ukuma ezokuthutha. Futhi ekugcineni, abehlela phansi emgwaqweni, nje smile besidindilize. Believe me, lezi zinyathelo ezilula kuyogcina kubangele yokuthi yini nje ukuletha ukuba khona nabantu abaseduze nawe kancane ezinhle, kodwa ungakwazi ukuhlobisa kanye ukuphila kwakhe.
Wazi kanjani ukuthi umuntu omuhle? Empeleni, lo mbuzo kungenakwenzeka ukunikeza impendulo esiqondile. Nakuba abaningi ngeke ngokuqiniseka ukuthi ukuze unqume ukuthi yini elungile, kuthatha isikhathi. Phela, njengoba sishilo, abantu bangakwazi ukwenza izenzo ezinhle, ngokusekelwe ngezidingo zabo siqu, futhi ngenxa yomusa ngothando. Kungenxa yalesi sizathu, ukuze abone ukuthi ngempela indoda muhle, kubalulekile ukubheka kuye ngendlela efanele. Uma ngempela akanandaba umusa, futhi isikhathi eside kusiza abantu, khona-ke umuntu onjalo angabhekwa ezinhle. Futhi banake ibinzana phakathi nengxoxo. Ukulahlwa, intukuthelo nomona - lawa okuyizimfanelo nobuntu Ungumuntu omuhle.
Sengiphetha, ngifuna ukusho ukuthi kuze kufike ubungekona nesihluku ezweni lethu lesimanje yena usafuna bayakholelwa ukuthi leli zwe namanje abantu ezinhle abangaphezu kuka ezimbi. Futhi uma wonke umuntu osemhlabeni kuyoba okungenani ngezinye izikhathi ukwenza okuhle, bese izwe lethu ngokuqinisekile kuyoba ngcono.
Indlela yokwenza ukuba nginconywe ukuba amadoda
Ngubani umuntu olwela ukungenzi phutha futhi uma sibheke empumelelweni?
Iqhaza yezenhlalakahle yomuntu
Kuphela best Ungadla: herring ne anyanisi kanye uviniga zokupheka
Sika insimbi: ukudlula, impumelelo, izithombe
Quote nobuqotho nothando
Umcamelo kwabesifazane abakhulelwe ngezandla zabo: lula futhi engabizi
Gamma-interferon: indima kanye nokubaluleka emzimbeni womuntu
Umdlavuza endometrial - kuyini? Izimpawu endometritis kwabesifazane. Zabesifazane - endometritis